Invastimantiin kamuu faayidaa ummataa eegsisuu qaba
Heerri Mootummaa RFDI, keeyyanni 44 mata duree mirga nageenya naannawaa jedhu, keeyyata xiqqoo 1 jalatti “Namoonni hundumtuu naannawa qulqulluufi fayyaqabeessa jiraachuuf mirga qabu” jechuun haalliifi iddoon lammiin kamuu jiraatu qulqulluu ta'uu akka qabu ifatti tumeera.
Labsiin eegumsa fayyaa ummataa 200/1992 bahes dhangala'aa faalamaa kuusawwan dhangala'aa, kosii jiidhaan itti dhangalaafamu, iddoo dhangala'aan itti walmakamuufi dhangla'aan otoo hinwal'aanamiin gara qaamota bishaaniitti ykn gara qaamolee argama bishaaniitti gadilakkisuun dhorkaadha jedha.
Biyya heerriifi seerri ga'aan akkanaa jiru Godina Gujii, Aanaa Oddoo Shaakkisootti jiraattonni Ganda Dhibbaa Battee keemikaala Warshaan Warqii Laga Dambii Miidirook Itoophiyaa naannawatti gadilakkisuun rakkachaafi komii dhiyeessaati kan jiran.
Industirii naannawa sana ture waggoota 21 dura qarshii biliyoona 1.2n gara ofiitti naannefattee warqii omishuu kan jalaqabe warshichi, ammaan tana Laga Dambii dabalatee dhiyeenyuma lagichaatti bakka Saakarroo jedhamuttis hojiidhuma walfakkaaturratti bobba'ee jira.
Kaampaanichi adeemsa warqii baasuu kanaaf keemikaalota akaakuuwwan 11 ol fayyadamaa jira. Kanneen keessaa keemikaalli 'sinaayid' jedhamu summaa'ummaasaatiin tarree jalqabaarratti akka eeramuudha ragaaleen kan eeran.
Jiraattonni Ganda Dhibbaa Battee faalama naannawaa keemikaalichi qaqqabsiiseen dhukkuboota gara garaatiif isaan saaxiluu bira darbee daa'imman waggoota 10 as dhalatanillee qaama hiri'saafi laamshessaa jira jechuun ummanni naannawichaa komataa akka jiruudha waajjirri dhimmoota kominikeeshinii Godina Gujii tibbana kan ibse.
Dhimma kanaan walqabatee ummatni naannawichaa yeroo dheeraaf komii dhiyeeffachaa ta'uunis eerameera. Gaaffiin yeroo dheeraaf ture otoo furmaata hinargatiin, ummannis irratti hinmariyatiin darbees qaamni naannoos ta'e godinaa dhimmi ilaallatu hinbeekiin hayyamni hojii warshichaa haaromsamuun ummata daran mufachiiseera.
Invastimantiin gaggeeffamu guddina biyyaatiif murteessaa ta'ullee naannawa faaluufi miidhaa biraa jiraattota naannawaarraan ga'uufi dhiisuunsaa qaama dhimmi ilaallatuun mirkanaa'uu qaba. Gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsaan as warshaalee hawaasaarraan miidhaa qaqqabsiisaa turanirratti tarkaanfii fudhachaa turuunsaa kan yaadatamuudha.
Invastimantiin kamuu faayidaa ummataa kabachiisuufi dhiisuunsaas duraan dursee mirkanaa'uu qaba. Caasaaleen mootummaa dhimmoota akkasii akka hordofaniif hundaa'anis eddii ummanni garanaa garasii gungumee bakka rafanii dammaquurra durumaan dursanii hojmanee kennameef xiyyeeffannaan hordofuufi hojjechuu qaba.
Torban kana/This_Week 9632
Guyyaa mara/All_Days 1819052